galmudugnews.com » Universal TV oo u xuubsiibtay Puntland TV – Boob & Bililiqo waa soo jireen
Home » WARARKA » Universal TV oo u xuubsiibtay Puntland TV – Boob & Bililiqo waa soo jireen Universal TV oo u xuubsiibtay Puntland TV – Boob & Bililiqo waa soo jireen admin on
Apr 12th, 2013 //
No Comment Views 169636 Daaraha xusuustiyo, hadba midab la doortiyo.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139733 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31901 hitsContact US - 30635 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26197 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25658 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25313 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23910 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23088 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22468 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22386 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21495 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21159 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21156 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20862 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19895 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19895 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19297 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18533 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17839 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17789 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17700 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16912 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16862 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15552 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15506 hits Home Contact US